Telefoonada - Qalabka Gadget | Wararka Gadget (Bogga 6)
OnePlus 3 wuxuu joojiyaa in lagu iibiyo Yurub, ugu yaraan illaa bisha Sebtember
Warka xun ee qof walba waana taas in OnePlus 3 aan dib dambe looga iibin Yurub ugu yaraan illaa bisha Sebtember ee soo socota sida uu xaqiijiyay OnePlus.
Nexus cusub ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 4-ta bisha Oktoobar
Google waxay diyaarinaysaa Nexus cusub iyadoo sida la sheegayo kuwan si rasmi ah loo soo bandhigi karo Oktoobar 4.
Sawirada Samsung Galaxy Note 7 maalin ka hor inta aan la bilaabin
Waxaan horeyba u cadeynay naqshadda nuucaan cusub ee Samsung, Galaxy Note 7, uu yeelan doono, laakiin wali ...
LG wuxuu si rasmi ah u soo bandhigi doonaa LG V20 oo leh Android 7.0 bisha Sebtember
Waxay ahayd xanta u muuqatay mid xoogan, laakiin hadda LG waxay xaqiijisay inay soo bandhigi doonto LG V20, oo soo bandhigi doonta Android 7.0, bisha Sebtember ee soo socota.
Dhamaan faahfaahinta gaarka ah ee Samsung Galaxy Note 7
Kuwani waa xanta la xaqiijiyey ee khuseysa Samsung Galaxy Note 7. Waxaan ku soo koobeynaa sidii had iyo jeer ku jirtay Gadget News.
5 qalab oo muhiim u ah taleefankaaga casriga ah ama kaniiniga
Haddii aadan ka go'nayn taleefankaaga casriga ah ama kaniiniga maalin kasta, maanta waxaan ku tusinaynaa 5 qalab oo gabi ahaanba muhiim u noqon doona muddo gaaban.
Waxqabadka Sony Xperia X wuxuu horseed u yahay kamaradaha mobilada
Waxqabadka Sony Xperia X wuxuu noqday aalad hoggaamineed marka la eego tayada sawir qaadashada sida ku xusan dib u eegista ugu dambeysay.
Hadda waa suurtagal in la keydiyo Xiaomi Redmi Pro oo leh qiimo bilow ah 225 euro
Xiaomi Redmi Pro horey ayaa loo sii haysan karaa, Shiinaha, oo leh qiimo bilaw ah oo ah 225 euro, taas oo shaki la’aan ah qiime xasaasi ah.
Xperia F8331 waxaa lagu magacaabi karaa Sony Xperia XR
Falanqeeyayaasha adduunka ayaa bilaabay inay isku xiraan dhibcaha si ay u soo gabagabeeyaan in Xperia F8331 loogu yeeri karo Sony Xperia XR
Mustaqbalka Nexus Marlin ayaa soo ifbaxaya
Qayb ka mid ah Nexus Marlin oo ay samayn doonto shirkadda HTC ayaa la daadiyay waxayna si weyn ugu egtahay HTC 10, wax aan layaab lahayn gabi ahaanba.
Xayaysiis cusub oo u dhow Samsung Galaxy Note 7 ayaa u muuqda
Fiidiyowgan oo nooga imanaya kanaalka rasmiga ah ee shirkadda ee barta bulshada ee Youtube, ma na tuso ...
ZTE Axon 7 Mini oo si lama filaan ah u daadanaya
Waxaan horeyba uheysanay dhamaan faahfaahinta Axon 7 Mini, mana seegin fursada aan ugu keenno sidii had iyo jeer, Actualidad Gadget.
IPhone 7 miyuu luminayaa badhanka guriga ee jirka wanaag?
Waxaan ku dhownahay bisha Ogosto wararka xanta iyo xanta ah ee ku saabsan suurtogalka cusub ee iPhone 7 ayaa jooga ...
Intex Aqua Fish ayaa hadda soo baxday; telefoonkii ugu horreeyay ee Sailfish OS ah oo hadda la heli karo
Intex Aqua Fish waa magaca taleefankii ugu horreeyay ee suuqa ku soo dhaca Sailfish OS, nidaamka hawlgalka Jolla oo in badan laga hadlay ...
Xiaomi Redmi Pro hadda waa rasmi
Dhacdadii ay Xiaomi maanta qabatay, waxay si rasmi ah u soo bandhigtay Redmi Pro cusub, oo u taagan qeexitaankiisa iyo mar kale qiimaheeda
Blackberry DTEK50 hadda waa rasmi oo waxay umuuqataa nuqul kaamil ah Alcatel Idol 4
BlackBerry waxay si rasmi ah u soo bandhigtay Blackberry DTEK50 cusub oo aad ugu eg Alcatel Idol 4. Spain gudaheeda waxaad awoodi kartaa inaad kaydsato laga bilaabo maanta
Sawirada Sony Xperia F8331 cusub waa la sifeeyey
Ma dhihi karno Sony waxay mareysaa waqti aad u wanaagsan markay tahay taleefannada casriga ah iyo haddii ...
Sawir ah Blackberry Neon ayaa la daabacay, Terminalka xiga ee Balckberry ee leh Android
Dhamaadka toddobaadkan waxaan la kulmi doonnaa mobiillada cusub ee loo yaqaan 'Blackberry Mobiles' oo ay wataan Android, laakiin ka hor inta aynaan wax ka ogaanin ku soo daadashada Blackberry Néon cusub ...
The OnePlus 3 oo dahab ah ayaa imaan doona Yurub 1da Ogosto
OnePlus wuxuu xaqiijiyey saacadihii ugu dambeeyey in OnePlus 3 oo dahab ku jira laga heli doono suuqa Yurub bisha Ogosto 1.
OnePlus 3 wuxuu leeyahay taageerada USB-OTG, laakiin waa naafo yahay
OnePlus 3 wuxuu leeyahay taageerada USB OTG iyada oo loo marayo USB-C, in kasta oo uu naafo ahaan ugu liito nidaamka hawlgalka.
Sawirro iyo qeexitaannada Motorla Moto E ayaa xaday
Motorola Moto E, aalad qiime dhex dhexaad ah leh iyo qeexitaanno wanaagsan oo soo jiidan kara tiro wanaagsan oo adeegsadayaal ah
Nexus Sailfish wuxuu ku yeelan doonaa Snapdragon 820 gudaha
Fayl ayaa laga sii daayay Nexus Sailfish cusub, oo ah qalab HTC ah oo ku jiri doona qoyska Google ee Nexus oo leh Snapdragon 820 ...
IPhone 7 ayaa garaaci doona dukaamada bisha Sebtember 16 sida uu sheegay Evan Blass
IPhone 7 wuxuu umuuqdaa mid si rasmi ah loo soo bandhigayo bisha Sebtember 12 wuxuuna gaari karaa dukaamada kaliya 4 maalmood kadib, taas oo ah, 16-ka.
Soo dejiso sawirada Galaxy Note 7 hadda
Galaxy Note 7 wali rasmi ma ahan, laakiin waxaan horeyba u soo dajisan karnaa darbiyada isla markaana ugu adeegsan karnaa qalab kale.
Faahfaahin dheeraad ah oo muhiim ah oo ku saabsan Xiaomi Redmi Pro ayaa xaday
Kama joojinayno inta u dhexeysa wararka xanta ah iyo xogaha ku saabsan aaladaha cusub ee Xiaomi. Markan waxay ku saabsan tahay ...
Sida loo furo Samsung Galaxy Note 7 oo leh qalabka loo yaqaan 'iris scanner'
Waxaan mar horeba ku qanacsanahay in qalabkan qalabka 'iris scanner' ah lagu dari doono aaladda cusub shirkadda South Korea ee Samsung, ...
Sawirka ugu horreeya ee HTC Marlin ayaa muuqda, mustaqbalka Google Nexus
Sawirada HTC Marlin-ka cusub ayaa la kashifay, sawirro xaqiijinaya jiritaanka terminaalka iyo waliba inuu yeelan doono nooca cusub ee Android ...
Tani waxay noqon kartaa Samsung Galaxy S8 ee soo socota
Waa waqti dheer ka hor inta Galaxy S8 uusan suuqa soo gaarin, laakiin adeegsadayaal badan ayaa horey u sii qorsheeyey sida ay u jeclaan lahaayeen in terminalka cusub ee Samsung uu noqdo.
Dahabka OnePlus 3 ayaa ku dhow in la soo bandhigo
The OnePlus 3 oo ah midab dahabi ah ayaa si dhaqso ah looga heli karaa suuqa, sida soo saaraha Shiinaha uu ku dhawaaqay maalintii ay soo bandhigeen.
Kani waa Samsung Galaxy Note 7 cusub oo madow ah
Waxaa si kooban 11 maalmood uga hartay shirkadda South Korea in ay si rasmi ah noo tusto falkeeda cusub, Samsung Galaxy Note ...
Fiidiyow cusub ee iPhone 7 iyo markan midabka dahabka ubax
Waxay u dhowdahay wax la xaqiijiyay in qaabeynta aaladda cusub ee Apple ay aad ugu egtahay tii hore iyo ...
Xiaomi Max, oo ah falfal weyn oo naga tagay dareenno aad u wanaagsan
Waxaan tijaabinay Xiaomi Max, oo ah terminal leh shaashad aad u weyn oo 6.44-inji ah, qodobkaanna waan ku lafa gureynaa oo waxaan kuu sheegeynaa aragtidayada.
Galaxy Note 7 waxaa lagu arki karaa fiidiyoow dhawr maalmood ka dib soo bandhigidiisa
2da Ogosto, Galaxy Note 7 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa, taas oo maanta aan markale ku aragnay muuqaal duubay.
Shirkadda Amazon ee Moto G ma lahaan doonto bootloader-ka furan ee furan sida ay sheegtay shirkadda Motorola
Bootloader-ka cusub ee Moto G ayaa loo xirayaa mobilada Amazon, wax ay soo rogeen Amazon sida uu qabo Motorola lafteeda ...
Blu Studio Touch ugu dambeyntii wuxuu yimid Amazon
Blu Studio Touch, waa aalad laga iibsan karo shirkadda Amazon, dukaanka internetka ee lagu kalsoon yahay, in kasta oo uu yahay aalad "Shiineys" ah.
Sony Xperia M4 Aqua iyo M5 ayaa u cusbooneysiiya Android Marshmallow
Kuwani waa laba qalab Sony ah oo bilaabaya inay helaan Android Marshmallow inkasta oo aan ka dhow nahay ...
OnePlus 3 wuxuu ku guuleystaa RAM laakiin wuxuu lumiyaa batteriga cusbooneysiintan
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee OnePlus 3 waxay u horseedaysaa dadka isticmaala inay lumiyaan 1% batari 4-tii daqiiqaba RAM.
Shahaadada IP68 ee Samsung Galaxy Note 7 iyo S Pen
Qaabkan cusub ee Samsung ma imaan doono bandhigga isagoon ogeyn mid kasta oo ka mid ah faahfaahintiisa ...
7 ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu fiican suuqa oo leh Dual SIM
Ma u baahan tahay inaad ku iibsato taleefan casri ah oo leh Dual SIM? Maanta waxaan ku tusinaynaa 7 ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa oo leh muuqaalkan waxtarka leh.
Evan Blass wuxuu xaqiijinayaa inaan kaliya arki doonno laba nooc oo iPhone 7 ah oo magac loo bixiyay "Sonora" iyo "Dos Palos"
Evan Blass ayaa xaqiijiyay saacadihii ugu dambeeyay in iPhone 7-ka cusub uu kaliya ku soo gali doono suuqa laba nooc oo kala duwan.
Mobilada cusub ee loo yaqaan Blackberry ayaa la soo bandhigi karaa usbuuca soo socda
Taleefoonada gacanta ee cusub ee loo yaqaan Blackberry ayaa la soo bandhigi doonaa todobaadka soo socda, sida ay ka sheegaan degello internet oo kala duwan, laakiin maxay yihiin terminaallada aan ku ogaan doonno?
Redmi Pro waxaa la soo bandhigi doonaa July 27
Waa macquul in wararka xanta ah ee ku saabsan soo bandhigida suurtagalka ah ee casriga casriga ee Xiaomi July 27 - kaliya ...
Tani waa wax walba oo aan ka ogaanno iPhone 7 cusub
IPhone-ka cusub ee cusub ee loo yaqaan 'iPhone 7', oo loo baabtiisi doono sida iPhone 7 ayaa suuqa si dhakhso ah u soo gali doona, qodobkan waxaannu kuugu sheegaynaa wax kasta oo aannu ka ogaanno.
Meizu MX6 horeyba waa rasmi wuxuuna diyaar u yahay inuu istaago taleefannada casriga ah
Meizu MX6 horeyba waa rasmi oo maqaalkan waxaan kuu sheegeynaa dhamaan faahfaahinta calanka cusub ee Meizu oo dhawaan laga heli doono suuqa.
Abuur Pokédex kiiskan asalka ah iyo Samsung Galaxy S4
Npoole wuxuu ku kordhiyay pokemania Pokédexkan xiisaha leh ee aan ka abuuri karno Samsung Galaxy S4 iyo 3D printer ...
HP Elite X3 wuxuu kuyaalaa Yurub wuxuuna tilmaamayaa Mareykanka
HP Elite X3 wuxuu kuyaalayaa Yurub maanta wuxuuna bartilmaameedsanayaa Mareykanka inuu noqdo suuqa xiga ee xigta, isagoo hagaajinaya sicirka qalabkan Windows Phone.
Nokia ayaa soo saaraysa laba taleefan oo Android u adkaysta biyaha
Nokia ma soo saareyso oo kaliya taleefanno cusub laakiin sidoo kale taleefannadan waxay yeelan doonaan Android waxayna noqon doonaan kuwo u adkaysta biyaha sida ku cad shahaadadeeda IP68 ...
LG X Mach iyo LG X Max ayaa ugu dambayntii lagu arkay laba fiidyow oo xayaysiis ah
Ka dib markii aan la kulanay usbuuc ka hor waxaan ugu dambeyntii arki karnaa fiidiyow xayeysiis ah oo ku saabsan LG X Mach cusub iyo LG X Max oo ay ku faanayaan naqshad.
Keecoo K1, taleefan casri ah oo loogu talagalay iyaga iyo iyaga
Waxaan kuu sheegeynaa sababta qalabkan loogu talagalay badanaa dhagaystayaasha haweenka, iyo maxay yihiin qeexitaankiisa, Keecoo K1.
2299 Yuan ayaa ku kici doonta Meizu MX6
Daadinta qiimaha qaabka Meizu ee soo socda, Meizu MX6 waa cad yahay waxayna muujineysaa qiimaha ...
Fiidiyow loo malaynayo inuu yahay iPhone 7 oo aan lahayn maqal maqal ah
Waxaan joognaa Luulyo 15 iyo in ka badan hal bil in wararka xanta ah ee ku saabsan qaabka cusub ...
Huawei waxay si rasmi ah ugu soo bandhigeysaa Huawei G9 Shiinaha, in kasta oo ay ku jirto magac kale
Huawei wuxuu sii wadaa inuu kumbuyuutaro ka furo suuqa markanna wuxuu ahaa marki uu yimid Huawei G9, oo horeyba rasmi uga ahaa Shiinaha, inkasta oo uu ku jiro magac kale.
BQ Aquaris X5 Plus ayaa la iibin doonaa July 28
BQ Aquaris X5 Plus waa terminal ka mid ah noocyada Isbaanishka ee la iibin doono bisha Luulyo 28. Terminal la jaan qaadi kara nidaamka Galileo ...
Xiaomi ayaa wax noo soo bandhigi doonta 27-ka Luulyo
Waxyaabaha ku saabsan shirkaddani waa mid cajiib ah waana inaysan ka tagin mid ay na geliyeen mid kale. Kadib…
Dareemid ayaa xaqiijineysa "sawirka indhaha" ee loogu talagalay Galaxy Note 7
Daadinta ayaa xaqiijineysa "sawirka indhaha" ee loogu talagalay Galaxy Note 7 sawirkan cajiibka ah ee la socda cinwaanka maqaalkeena.
Si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay Moto E
Waxay ahayd maalmo naga fogeeyay inaan aragno Moto E-da cusub iyo dhowr xanta ka dib iyo imaatinka ...
Telecor wuxuu bilaabay inuu ku iibiyo aaladaha mobilada Xiaomi gudaha Spain
Qalabka mobile-ka ee Xiaomi waxaa horey loogu iibiyay dalka Spain qaab rasmi ah ama ka yar oo rasmi ah iyadoo loo marayo dukaamada Telecor.
Samsung Galaxy Note 7 wuxuu yeelan doonaa S Pen oo la hagaajiyay
Samsung Galaxy Note 7 wuxuu lahaan doonaa S Pen cusub, oo ah stylus la jaan qaadi doona howlaha cusub ee Samsung ee cusub ee TouchWiz interface ...
Xiaomi Pro ma noqon doonaa terminal qaali ah ee Xiaomi?
Xiaomi Pro waa magaca shaashad cusub oo ay Xiaomi ku shaqeyneyso taas oo dad badani yiraahdaan waxay noqon doontaa taleefanka casriga ee ugu qaalisan Xiaomi ...
Meizu MX6 wuxuu jebiyaa Geekbench qalabkiisa cajiibka ah
Meizu MX6 macno ahaan wuu jebiyay Geekbench dib u soo celinta mahadnaqa qalabkiisa cajiibka ah iyo processor-ka toban-geesoodka ah.
Pokémon Go wuxuu garaacaa Facebook waqtiyada isticmaalka
Pokémon Go wuxuu isbedel ku sameynayaa nidaamka deegaanka. Ilaa heer ay isticmaaleyaashu waqti badan la qaataan Pokémon Go marka loo eego shabakadaha bulshada sida Facebook
Waa rasmi, Samsung Galaxy Note 7 waxaa la soo bandhigi doonaa Ogosto 2
Waxay ahayd sir furan, laakiin hadda taariikhda la soo bandhigo ee Samsung Galaxy Note 7 waa rasmi. Xusuusnow inay noqon doonto bisha soo socota ee Ogosto 2.
Asus ZenFone 3 Deluxe, oo ah taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee wata processor Snapdragon 821
Asus ZenFone 3 Deluxe horeyba waa rasmi oo waa taleefankii ugu horreeyay ee soo rogaa processor-ka Snapdragon 821 oo leh awood aad u weyn.
IPhone 7 ayaa mar kale lagu arkay sawir la sifeeyay oo muujinaya kamaraddiisa cusub
IPhone 7 ayaa markale lagu arkay muuqaal sifeysan oo kamarad cusub oo kor u qaadi doonta qalabka dadka Cupertino la soo saaray.
Hadda waxaa la heli karaa Samsung Galaxy J2 (2016) Smart Glow
Samsung Galaxy J2 (2016) Smart Glow ayaa hada ku dhuftey suuqa bartamaha kala duwan warar xiiso leh iyo nashqad gaar ah.
Si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay Honor 8 iyo kamaraddiisa laba-geesoodka ah
Waxaan horeyba ugu jirnay bartamihii xagaaga iyo Sharafta 8 ayaa maanta lagu soo bandhigay Shiinaha oo ka mid ah taleefannada casriga ah ...
Samsung waxay ka dhigeysaa Galaxy J1 Ace Neo mid rasmi ah, taleefan casri ah oo loogu talagalay soo gelitaanka
Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay Galaxy J1 Ace Neo, oo ah taleefan casri ah oo heerkiisu sarreeyo oo leh waxyaabo ka xiiso badan.
Xirmooyinka bilowga ah ee HP Elite X3 ayaa ku kici doona in ka badan 1.200 euro
Hp Elite X3 wuxuu lahaan doonaa xirmooyin dhowr ah oo leh taleefan iyo qalab. Xirmooyinkaani waxay lahaan doonaan qiimo sare, midka ugu dhameystiran wuxuu dhaafi doonaa 1.200 euro ...
Nexus 5P Sailfish-ka soo socda ayaa lagu muujiyay muuqaal sir ah
Nexus-ka soo socda, ee la baabtiisay Nexus 5P Sailfish ayaa markii ugu horreysay lagu arkay muuqaal sir ah oo si dhakhso leh ayuu rasmi u noqon karaa.
7 sababood oo aadan ugu baahnayn taleefan casri ah oo heer sare ah
Ma waxaad badali doontaa taleefankaaga casriga ah maanta waxaan kuu sheegeynaa 7 sababood oo aadan ugu baahnayn taleefan casri ah oo heer sare ah isla markaana aad lacag badan ku bixiso.
Tani waa wax walba oo aan ka ogaanno Samsung Galaxy Note 7 cusub
2da Ogosto waxaan si rasmi ah u ogaan doonnaa Samsung Galaxy Note 7 cusub waana tan dhammaan macluumaadka aan ka ognahay.
Lumia 950, oo ah taleefan casri ah oo wanaagsan Windows 10 Mobile-ka intii aan filaynay in ka badan
Maanta waxaan falanqeyneynaa Lumia 950, oo ah taleefan casri ah oo xiiso leh oo leh Windows 10-ka cusub ee Mobile-ka, kaas oo ku dhowaad dhammaanteen aan waxbadan ka fileynay.
21 xaqiiqooyin oo ku saabsan OnePlus 3 oo ay tahay inaad ogaato cudurdaar la’aan
Shalay ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay OnePlus 3 maantana waxaan ku tusaynaa maqaalkan 21 xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan taleefankan casriga ah.
5 codsi si loo badbaadiyo nolosha batteriga ee casrigaaga Android
Waligaa ma haysataa awood batteri oo kugu filan taleefankaaga casriga ah? Ha ka walwalin mar dambe maxaa yeelay adoo adeegsanaya 5taan codsi waxaad ku badbaadin kartaa nolosha batteriga qalabkaaga gacanta.
Sidee loo helaa taleefankaaga casriga ah ee Android haddii uu lumo ama la xado
Haddii nasiib darro kugu dhacday inaad lumiso taleefankaaga casriga ah ee Android ama la xaday, maanta waxaan ku tusaynaa sida loo helo si fudud.
Kuwani waa taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan suuqa marka loo eego AnTuTu
AnTuTu waxay daaha ka rogtay 10-ka taleefanada casriga ah ee ugu awooda badan uguna waxqabadka sareeya suuqa waxaanan kugu tusinaynaa maqaalkan xiisaha badan.
Asus Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe iyo Zenfone 3 Ultra hadda waa rasmi
Kadib xan badan kadib Asus wuxuu si rasmi ah u sameeyay terminalka cusub ee qoyska Zenfone 3 kaas oo suuqa laga heli doono dhawaan.
8-da barnaamij ee ugu wanaagsan ee warqadaha lagu qoro Android
Haddii aad jeceshahay inaad ka bedesho gidaarkaaga Android, maanta waxaan soo jeedineynaa waxa suurto gal ah 8 codsi ee ugu fiican ee la sameeyo.
Ma tahay wakhti ku habboon in la iibsado taleefan casri ah oo heer sare ah?
Maanta waxaan isku dayeynaa inaan jawaab ka siino su’aasha xiisaha leh; Ma tahay wakhti ku habboon in la iibsado taleefan casri ah oo heer sare ah? sidoo kale waxaan kaa codsaneynaa fikirkaaga.
Android N shanta qodob ee muhiimka ah
Android N ayaa hada rasmi ah kadib markii shalay lagu soo bandhigay Google I / O maantana waxaan ku tusaynaa 5ta qodob ee muhiimka ah ee noocaan cusub ee Android ah.
Moto G4 iyo G4 Plus durba waa rasmi
Moto 4G iyo 4G Plus durba waa rasmi oo wararka, oo aan dib ugu eegeyno maqaalkan xiisaha leh, waa kuwo aad iyo aad u wanaagsan.
Kani waa dhamaadka-sare ee suuqa taleefannada gacanta ka dib markii lagu daray ee ugu dambeeyay
Qaybta sare ee suuqa taleefanka gacanta ayaa si xawli ah u socda waana taas sababta maanta aan dib ugu eegeyno taleefannada casriga ah ee ugu wanaagsan sanadka 2016.
Xiaomi Max hadda waa rasmi
Dhowr daqiiqo ka hor, Xiaomi waxay si rasmi ah u soo bandhigtay Xiaomi Max cusub, oo ah muuqaal leh shaashad dhan 6,4 inji oo aad u qiimo badan.
Ma rabtaa inaad hesho ama aad horumariso caymiska moobilkaaga.Maanta waxaan si fudud ugu sharaxeynaa taxanahan taxanaha ah sida loo sameeyo.
Ma ahan waqti aad u fog, mid ka mid ah maalmahaas oo aad ku soo toosto xaalad xun iyo halka ay wax walba yihiin ...
Sida looga saaro farriinta codka moobaylkaaga
Ma dooneysaa inaad ka saarto fariinta codka moobaylkaaga.Maanta waxaan sharaxaad ka bixinaynaa sida ugu fudud ee looga demin karo shirkadaha waaweyn ee mobilada.
7 sababood oo kugu kalifaya inaad aragto inaad bedesho moobilkaaga
Haddii mobiilku uu duugoobay oo aanu kuu oggolaanayn inaad wax uun qabato, maanta waxaannu kuu soo bandhigaynaa dhawr sababood oo aad ku beddeli karto moobilkaaga.
Kuwani waa qaar ka mid ah sababaha aadan u rakibeynin RAM iyo batariyeyaasha wax ku kiciya Android-kaaga
Maanta waxaan sharxeynaa qaar ka mid ah sababaha ay tahay inaadan ku rakibin qalab aad ku shaqeysid RAM ama batteriga wax ku kiciya
7 sababood oo ku kalifaysa inaad ku iibsato taleefan casri ah shaashad weyn waa fikrad aad u fiican
Miyaad tixgelisay inaad iibsato shaashad leh shaashad ka weyn 6 inji? Maanta waxaan kuu sheegaynaa 7 sababood oo ay fikrad weyn u noqon karto.
7 khiyaanooyinka kamaradda iPhone si aad u noqotid sawir qaade xirfad leh
Haddii aad rabto inaad sawirro kaamil ah ku qaadatid kamaraddaada iPhone-ka, maanta waxaan ku tusinaynaa 7 tabaha si aad u noqoto sawirqaade xirfad leh oo run ah.
7 ciyaaro istiraatiiji ah oo lagu raaxeysto casrigaaga
Ma jeceshahay ciyaaraha istiraatiijiyadeed?. Maanta maqaalkan waxaan ku tusineynaa istaraatiijiyadaha ugu wanaagsan ee moobiilka ee aad ku raaxeysan doonto saacado
7 qalad oo laga fogaado marka aad iibsaneyso taleefan casri ah
Iibsashada taleefanka casriga ahi ma aha hawl fudud oo waa inaad had iyo jeer maskaxda ku haysaa khaladaadkan si aanad uga dhigin midkoodna.
Maanta waxaan dhalada weyneysa dul saarnaa FreedomPop, oo ah taleefanka gacanta ee bilaashka ah
FreemdomPop ayaa suuqa soo galay isagoo ah shirkadi ugu horeysay ee mobiil lacag la’aan ah, maantana waxaan dul dhignay muraayadda weyneysa si aan u eegno inay tani run tahay iyo in kale.
Meizu Pro 6 horeyba waa rasmi, waana bahal dhab ah oo qaabkiisu aad u qurux badan yahay
Meizu Pro 6 horeyba waa rasmi oo qodobkaan waxaan kuusoo bandhigeynaa dhamaan wararka ku saabsan calanka Meizu cusub ee saaka lasoo bandhigay.
Apple waxay soo bandhigi doontaa macruufka 10 dhawaan iyo maanta waxaan kuu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah wararka iyo xulashooyinka cusub ee aan ku arki karno nooca cusub ee nidaamka qalliinka.
Ma rabtaa inaad ogaato haddii mobilada aad iibsaneyso la xaday? Maanta waxaan kuu sharxeynaa sida loo ogaado qaab ka fudud ama ka yar.
Huawei P9 Vs Samsung Galaxy S7, duel aan sinnayn? on the meelaha sare ee dhamaadka
Maanta waxaan wajaheynaa Huawei P9 iyo Samsung Galaxy S7 fool ka fool, yaa ku guuleysan doona isqabqabsigan u muuqda mid aan sinnayn?
5 tricks si loo badbaadiyo xogta on your casriga ah
Miyaad si dhakhso leh u dhammeysaa xogta sicirka moobilkaaga? Ka-hor-tagtaa inay markale kugu soo dhacdo adiga oo adeegsanaya 5taan tabaha si aad ugu keydiso xogta taleefankaaga casriga ah.
Tani waa dhammaan macluumaadka aan ka ogaanno Huawei P9
6da Abriil, Huawei waxay si rasmi ah u soo bandhigi doontaa Huawei P9 cusub oo aan si qoto dheer u ogaanay maanta laba maalmood ka dib soo bandhigiddeeda.
7 sababood oo iPhone SE ugu guuleysan doono suuqa
Kuwani waa qaar ka mid ah sababaha ay iPhone SE u noqon doonto guul suuqa, ma ka fikiri kartaa wax intaas ka badan?
5 sababood oo ah helitaanka iPhone SE waa fikrad aad u fiican
Ma waxaad ku fikireysaa inaad iibsato iPhone SE? Maanta waxaan kuu sheegeynaa 5 sababood oo ay fikrad weyn u noqon karto inaad iibsato iPhone-kan cusub.
7 sababood oo ah inaadan iibsan Samsung Galaxy S7
Haddii aad ka fikireyso inaad iibsato Samsung Galaxy S7 maanta waxaan ku siineynaa 7 sababood oo aadan u sameynin xaalad kasta.
7 sababood oo loo iibsado Samsung Galaxy S7
Maanta Samsung Galaxy S7 cusub ayaa la iibiyay waana kuwan sababaha ay tahay inaad u iibsato casrigaan cusub.
Kuwani waa casriga ugu fiican ee sanadkan 2016
Waxaan ku jirnay 2016 dhowr bilood laakiin kani waa liistada boosteejooyinka ugu wanaagsan sanadkaan, oo hubaal in waxyar uun iska beddeli doonaan bilaha soo socda.
Samsung Galaxy S7 Vs LG G5, sii wadida wajiga horumarka
Samsung Galaxy S7 iyo LG G5 durbaba waa rasmi maantana waji ayaan waji ka waji ka dhex muujineynaa taas oo leh guuleyste cad, ama ugu yaraan aragtideena.
Galaxy S7 / Edge iyo LG G5 kuma rakibi karaan codsiyada kaarka MicroSD
Isticmaalka kaarka SD si loo ballaariyo xusuusta waa mid ka mid ah qodobbada ugu wanaagsan aaladaha Android. Laakiin maxaa dhacaya haddii aadan ku rakibi karin barnaamijyada MicroSD?
Xiaomi Mi5 horeyba waa rasmi
Xiaomi Mi5 horeyba waa rasmi oo maqaalkan waxaan kuu sheegeynaa dhammaan macluumaadka ku saabsan astaanta cusub ee Xiaomi.
Sida loo iftiimiyo astaanta Apple ee iPhone 6
Waqtigaan la joogo, markii ay weli shan bilood ka hartay Apple inay soo saarto jiilka xiga ee iPhone-ka, kaasoo 7 ku qaadan doona ...
Xperia X, qoyska cusub ee casriga ah ee ka socda Sony
Shirweynihii adduunka ee mobilka ayaa maanta si rasmi ah u bilaabmay iyada oo ay soo bandhigeen Sony oo ka tirsan qoyska cusub ee casriga ah ee loo yaqaan 'Xperia X'.
Samsung Galaxy S7 vs Samsung Galaxy S6, wax badan oo isku mid ah?
Samsung Galaxy S7 ayaa la soo saaray isbarbardhigana lagu sameeyay qaabkii hore waa lama huraan, in kasta oo xaqiiqda ah in kiiskan S7 uu ka fiicanyahay S6.
Sugitaanku wuu dhammaaday, Samsung Galaxy S7 hadda waa rasmi
Kadib bilooyin iyo bilooyin xan ah oo ku saabsan Galaxy S7 cusub daqiiqado ka hor Samsung ayaa soo bandhigtay ...
LG G5 vs LG G4, ma jiraan waxyaabo kale oo moodeellada ka baxsan?
Isbarbardhig yar oo u dhexeeya LG G5 iyo LG G4, oo ah laba terminaal LG heer sare ah oo siin doona oo siin doona qanacsanaanta adeegsadayaashooda iyo isticmaaleyaashooda mustaqbalka.
5 taleefan oo casri ah oo shaashad yar leh
Suuqa taleefanka gacanta ayaa loo badalay waqti ka dib dhanka taleefannada casriga ah iyadoo shaashaddaba ...
Xiaomi Mi4c, waa bahal dhab ah oo qiimo ku leh qof walba gaari karo
Sugitaanka Xiaomi inay si rasmi ah u soo bandhigto Xiaomi Mi5 cusub, maalmihii ugu dambeeyay way dhacday ...
Samsung Galaxy S7; raajo buuxda maalmo gudahood soo bandhigidda
Samsung Galaxy S7 waxaa la soo bandhigi doonaa 21-ka maantana waxaan ku tuseynaa dhamaan macluumaadka aan ka ogaanay taleefankan casriga ah ee cusub oo muddo dheer la sugayay.
Ma waxaad dooneysaa inaad iibsato xayawaan? Kuwani waa 5-ka ugu jaban suuqa
Ma waxaad raadineysaa xatooyo? Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa 5 ka mid ah kuwa sida ugu fiican ugu hogaansami kara hadalka wanaagsan, qurux iyo jaban.
5 sababood oo ah inaadan u iibsan ilmahaaga taleefan casri ah
Waxaan xasuustaa sidii ay ahayd aaladdii ugu horreysay ee mobilka maanta, maxaa yeelay taasi ma ahayn taleefan casri ah ama wax uun, oo ay i siiyeen ...
Waxaan falanqeyneynaa Sharafta 7, mid ka mid ah kuwa ugu fiican-dhamaadka
Waxaan falanqeyneynaa Sharafta 7, oo ah heer sare oo leh wax ka badan qiimaha la hagaajiyay.
9 shaqooyin caqli gal ah oo aan ka heli karno taleefankeena casriga ah
Haddii aan jeclaanno iyo haddii kaleba, taleefannadeenna casriga ahi waxay na siisaa hawlo aan macquul ahayn. Qodobkaan waxaan kusoo bandhigeynaa 9 kamid ah oo sida xaqiiqda ah aan wada isticmaalnay waqti.
5 tricks si aad ugu soo dallajiso taleefankaaga casriga xawaaraha breakneck
Ma dooneysaa inaad ku dalacdo taleefankaaga casriga ah xawaaraha jaban? Maanta waxaan kuugu sheegi doonaa dhowr tabaha maqaalkan si aad ugu guuleysato si aad u fudud.
9 yutiilitiyada xiisaha leh ee casrigaagii hore
Ma haysaa taleefan casri ah oo duug ah oo lagu iloobay khaanada Kuwaani waa 9 sababood oo aad qalabkii hore ee mobilka u siin lahayd nolol labaad.
5 taleefannada gacanta ee Samsung oo aad ku iibsan karto wax ka yar 200 euro
Ma rabtaa inaad iibsato taleefanka gacanta ee Samsung? Liiskan waxaan kuugu soo bandhigeynaa 5 nooc oo kala duwan oo aad ku iibsan karto wax ka yar 200 euro.
Falanqaynta Asus Zenfone 2, telefoon ereyga dheelitirkiisu aad u xoogan yahay
Waxaan fulineynaa falanqaynta Asus Zenfone 2 si aan u helno taleefan ka kooban walxaha aan ka helno tayada ugu fiican.
Microsoft Lumia 640, waa bartamihii xiisaha badnaa ee horey u lahaa Windows 10 Mobile
Maanta waxaan falanqeyneynaa Lumia 640, oo ah terminaal udub dhexaad u xiiso badan oo naga reebay inaan la yaabno waxqabadkiisa wanaagsan iyo ismaamulkeeda.
Tani waa dhammaan macluumaadka aan ka ognahay LG G5
LG wuxuu ku soo bandhigi doonaa LG G5 cusub xarunta MWC maantana waxaan kuugu sheegeynaa maqaalkan dhamaan macluumaadka aan ka ogaanay casrigaan.
7 Khiyaanooyinka Telegram oo aad ku noqon doonto khabiir run ah
Ma dooneysaa inaad noqoto khabiir Telegram oo run ah Bal u fiirso tabahaan aan maanta soo jeedineyno waadna ku guuleysan doontaa muddo gaaban.
5 talo si aad ugu ilaaliso taleefankaaga casriga ah maalinta koowaad
Ma rabtaa in taleefankaaga casriga ahi u shaqeeyo sida maalinta koowaad? Raac tilmaamahan aan maanta soo jeedinayno lagana yaabee inaad ku guuleysato dhibaato la'aan.
Maamuus 4X, heer dhexe oo leh astaamo waaweyn iyo qiimo soo jiidasho leh
Maanta waxaan falanqeyneynaa 'Honor 4X', oo ah xarun dhexdhexaad ah oo u taagan waxqabadkeeda, naqshadeynta iyo qiimaheeda, in kasta oo nasiib darro ay leedahay xoogaa daciif ah.
6 talo si aad uga faa iideysato casrigaaga cusub
Saddexda boqor ma kuu keeneen taleefan casri ah oo cusub? Hadday jawaabtu haa tahay, halkan waxaa ku yaal tilmaamo si aad uga faa'iideysato.
6 casriga ah oo qumman in la siiyo ama la siiyo naftaada Kirismaskan
Ma waxaad siin doontaa qof taleefan casri ah? Liiskan waxaan ku tusaynaa qaar kaamil ah oo ku saabsan.
Tani waa wax walba oo aan ka ogaanno Samsung Galaxy S7 cusub
Samsung Galaxy S7 waxay aad ugu dhowdahay in si rasmi ah loo soo bandhigo waana tan kaliya ee aan ka ognahay calanka cusub ee Samsung.
Kuwani waa sifooyinka aasaasiga ah ee kamaradda casriga ahi ay tahay inay lahaato
Qormadan waxaan ku tusinaynaa astaamaha aasaasiga ah ee kamaradda casriga ahi ay tahay inay lahaato si ay ugu sarreyso sawirradayada.
6 sababood oo ah inaad u iibsato taleefan casri ah oo heer sare ah adigoon ka labalabeyn
Qodobka aan ku siineyno 6 sababo oo ah inaad u iibsato, fekerkeenna, casriga loogu yeero casriga sare.
Ma waxaad raadineysaa taleefan casri ah oo fiican, raqiis ah oo raqiis ah? Hagaag, liiskan waxaan kuugu soo bandhigeynaa 6 terminal xiiso leh oo ka yar 300 euro.
Xiaomi Redmi Xusuusin 3 horeyba waa rasmi oo kaliya kuma faano qiimaha laakiin sidoo kale naqshadeynta iyo qeexitaannada
Xiaomi Redmi Note 3 horeyba waa rasmi, marka lagu daro qiime dhimisna waxay nagula yaabi doontaa qeexitaankiisa iyo nashqadeynta ay shaqeysay.
6 sababood oo ah inaadan waligaa iibsan casriga casriga ah
Ma waxaad iibsaneysaa taleefan casri ah oo heer sare ah? Akhri sababahan oo ah inaadan horay u sameynin.
5 sababood oo ah inaad u iibsato BlackBerry Priv
Miyaad ka fikireysaa suurtagalnimada inaad iibsato BlackBerry Priv?, Hagaag maanta maqaalkan waxaan ku siineynaa 5 sababood oo aad ku sameyso adigoon aad uga fikirin.
5 taleefan oo casri ah oo xidig ka ahaa suuqa hadana aan ku iibsan karno qiimo jaban
Ma dooneysaa taleefan casri ah oo heer sare ah? Liiskan waxaan ku tusineynaa 5 qalab oo xiddigo ahaan jiray xilligoodii haddana ku faano qiimahooda.
5 codsi oo ah inaadan waligaa ku rakibin casrigaaga
Ka soo horjeedka waxa ay u muuqan karto, waxaa jira codsiyo aanad waligaa ku rakibi karin taleefankaaga casriga ah maqaalkanna waxaan ku tusaynaa 5 ka mid ah.
6 dabeecado xun xun oo aad la leedahay casrigaaga casriga ah ee ay tahay inaad iska tirtirto hadda
Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa ku dhaca caadooyin xunxun oo kala duwan casriga casriga ah, maantana waxaan ku tusineynaa qaar ka mid ah kuwa ugu xun ee ay tahay inaan iska baabi'inno.
5 sababood oo HTC One A9 uga fiican yahay iPhone 6S
HTC One A9 horeyba waa rasmi maantana waxaan kuu sheegeynaa 5-ta sababood ee taleefankan casriga ahi uga fiicanyahay Apple iPhone 6S.
Ma rabtaa inaad u isticmaasho WhatsApp khabiir run ah? Thanks to 10-kan tilmaamood waxaad heli doontaa mid aad u fudud.
Dib u eegida iPhone 6s Plus cusub
Waxaan falanqeyneynaa iPhone 6s Plus cusub, isbeddeladiisa heerka qalabka iyo barnaamijyada, iyadoo la arkayo 3D Touch oo ficil ah
7 qalad oo ay tahay inaadan ku sameysan casrigaaga cusub
Qodobka aan ku tusayno khaladaad taxane ah oo ay tahay inaadan ku sameysan casrigaaga cusub ama kii hore.
5 been ah oo ku saabsan taleefankaaga casriga ah ee aad marwalba aamintay adigoon libiqsanayn
Qodobka aan kuu sheegeyno 5 been ah oo ku saabsan taleefankaaga casriga ah oo nasiib darro aad marwalba aamintay adigoon ka waaban.
5 codsiyo casriga ah si kor loogu qaado wax soo saarkaaga
Ma rabtaa inaad wax soo saar badan yeelato Maanta waxaan kaa caawinaynaa inaad ku gaarto 5-ta barnaamij ee casriga ah ee si weyn kuu caawin doona.
Tani waa dhammaan macluumaadka aan ka ognahay BlackBerry Priv
Abaalmarinta BlackBerry waxay saaran tahay bushimaha qof walba maantana waxaan kuu soo bandhigeynaa dhammaan macluumaadka aan ka ognahay terminaalkan.
Nexus 6P Vs Nexus 6, isbeddelka Google phablet ma ku filnaa?
Qodobka aan dhigeyno Nexus 6P cusub iyo Nexus 6 asalka ah fool ka fool. Yaad u maleyneysaa inuu qorraxda ka adkaan doono khilaafkaan?
Nexus 5X Vs Nexus 5, hadda iyo wixii ka dambeeyay Google
Shalay waxay ahayd maalin qaas u ah dhamaanteen oo si dhow ula socda suuqa mobilada iyo kuwa ...
Google wuxuu soo bandhigayaa Nexus 5X oo leh 5,2 ″ shaashad iyo Snapdragon 808 laba nooc oo 16 / 32GB ah $ 379/429
Wixii € waxaad heleysaa Nexus 5X cusub oo hada ay soo bandhigtay Google una taagan shaashadeeda 5,2 ", 2 GB oo RAM ah iyo Snapdragon 808 hexa-core chip.
10 talooyin si aad ugu qaadatid sawirro ku habboon ugu fiican casrigaaga
Ma dooneysaa inaad ku hesho sawirro ku dhowaad kaamil ah casrigaaga? Qodobkaan waxaan ku siineynaa 10 talooyin si aad ugu guuleysato si fudud.
6 taleefannada gacanta oo ka fiican iPhone 6S oo iyaguna aad uga jaban
Qodobka aan ku tusineyno 6 casriga ah oo ka fiican iPhone 6S iyo wixii ka sarreeya oo aad uga jaban.
Kuwani waa dhammaan taleefannada casriga ah ee Nexus ee aan awoodnay inaan ku raaxeysto illaa maanta
Qodobka aan ku sameyno dib-u-eegis xiiso leh dhammaan taleefannada casriga ah ee Nexus ee aan awoodnay inaan ku raaxeysto ilaa taariikhda.
Toddobo siyaabood oo lagu sii daayo booska kaydinta ee Android
Ma u baahan tahay meel lagu keydiyo qalabkaaga Android? Hadday jawaabtu haa tahay, raac tilmaamahan si aad u bannayso meel lagu kaydiyo.
Imisa daqiiqo ayuu fiidiyowga 4K ku qaadanayaa iPhones-ka cusub?
Duubista 4K oo ay weheliso moodooyinka cusub ee iPhone-ka, oo ku sii socda qaabka aasaasiga ah ee 16 GB, samee isku-dhaf xanuun leh haddii aan dooneyno inaan u adeegsanno 4K duubista
iPhone 6S vs Samsung Galaxy S6 Edge +, dagaalka loogu jiro inuu noqdo kan ugu fiican casriga
IPhone 6S horey ayaa loo soo saaray isbarbardhigana waa lama huraan. Mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la codsado waa iPhone 6S vs Samsung Galaxy S6 Edge +. Mucjiso ee Titans.
Sony Xperia Z5 Vs Samsung Galaxy S6 edge +, laba waji ayaa is wajahay
Maqaalkani waxaan ku dhejinay Sony Xperia Z5 iyo Samsung Galaxy S6 gees + fool ka fool ah, shaki la'aan laba ka mid ah kuwa casriga ah ee xilligan ugu fiican.
Kuwani waa sheekooyinka ugu muhiimsan ee cusub ee Android 6.0 Marshmallow
Android 6.0 Marshmallow waa nooca cusub ee Android oo dhawaan bilaabi doona inuu suuqa si rasmi ah u gaaro maantana waxaan ognahay warkiisa ugu weyn.
Kuwani waa 7da kulan ee tartanka ugu fiican ee aad ugu raaxeysan karto taleefankaaga casriga ah
Ma jeceshahay wadista? Hadday jawaabtu haa tahay, liiskan aan adiga kugu abuurnay, waxaan ku tusi doonnaa cayaaraha tartanka ugu fiican ee casriga ah.
Soo ogow casriga casriga ah ee Android oo leh madax-bannaanidooda suuqa
Maqaalkani waxaan ku nuuxnuuxsaneynaa daraasad ku saabsan taleefannada casriga ah ee Android oo leh madax-bannaanidooda suuqa oo laga yaabo inay adiga kugu xiiso badan tahay.
Innjoo One, oo ah taleefan casri ah oo shiineys ah oo qaab casri ah wata
Innjoo One waa taleefan casri ah oo cusub oo ka yimid Shiinaha oo leh naqshad aad u fiican iyo qeexitaanno aad u xiiso badan.
7 talo si aad si ammaan ah uga dhex isticmaasho internetka taleefankaaga casriga ah
Maqaalka xiisaha leh ee aan ku tusineyno 7 talooyin oo aad si ammaan ah uga dhex mari karto internetka taleefankaaga casriga ah ee aan cidina iska indho tiri karin.
Kuwani waa qaar ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu fiican Shiinaha ee suuqa aad maanta iibsan karto
Miyaad ka fikireysaa inaad iibsato taleefannada casriga ee Shiinaha? Kuwani waa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ee aad maanta iibsan karto.
Halkee iyo sida loo iibsado OnePlus 2 casuumaad la'aan
Qodobka aan ku sharaxeyno qaab dhameystiran oo faahfaahsan halka iyo sida loo iibsado OnePlus 2 iyada oo aan la helin martiqaad.
Galaxy S6 Edge VS Galaxy S6 Edge +, laba waji ayaa waji ka waji u galay
Shalay ayaa la soo bandhigay geesta cusub ee Galaxy S6 + maanta waxaan waji ka waji u galineynaa Galaxy S6 edge oo horey suuqa uga jiray.
Galaxy Note 4 VS Galaxy Note 5, ma jiraan waxyaabo fara badan oo u dhexeeya labada?
Galaxy Note 5 horeyba waa rasmi oo qodobkaan waxaan la barbardhigeynaa Galaxy Note 4, ma mudan tahay in dib loo cusbooneysiiyo Xusuusqorkeena 4 qaabkii ugu dambeeyay?
Samsung Galaxy Note 5 Vs Samsung Galaxy S6 edge +, awooda S-Pen ma noqon doontaa final?
Maanta waxaan wajihi doonaa Samsung Galaxy Note 5 iyo Samsung Galaxy S6 edge + fool ka fool si aan u ogaano cida noqon doonta boqorka cusub ee darajada sare.
Samsung Galalaxy S6 edge + hadda waa rasmi
Samsung ayaa hadda sameysay Samsung Galalaxy S6 edge + rasmi ah inkasta oo aan horey u ogaanay ku dhowaad dhammaan qeexitaankeeda, haddana aad ayaan ula dhacnay.
5 taleefan oo casri ah oo leh shaashad 6-inch ah oo jacayl kugu ridi doonta
Ma waxaad raadineysaa taleefan casri ah oo leh shaashad 6-inch ah? Maqaalkan waxaan ku tusinaynaa 5-ta ugu qaddarinta badan isticmaalayaasha.
5 taleefannada casriga ah ee dhexdhexaadka ah oo ku faana batariga iyo qiimaha
Ma waxaad ubaahantahay taleefan casri ah lacag yar taasna waxay leedahay ismaamul weyn? Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa 5 xulasho oo adiga ikhtiyaar kuu noqon kara.
10-ka casriga ah ee wata kamarada ugu fiican suuqa
Mid ka mid ah waxyaabaha dadka adeegsada ay aad ugu qiimeeyaan taleefannada casriga ah waa kaameradda, maqaalkan waxaan ku tuseynaa 10ka kamaradda ugu fiican na siiso.
«7 tilmaamood oo ku saabsan u qaadashada taleefankaaga casriga ah xeebta»
Bartamaha xagaaga, u qaadashada taleefankeena casriga ah xeebta waxay noqon kartaa khatar, laakiin raacitaanka talooyinka aan maanta ku siinayno, wax walba waa in la xakameeyo.
5 codsi oo aad ku duubi karto wicitaan kasta oo mobilkaaga ah
Duubista wicitaanku waxay noqon kartaa kheyraad aad u wanaagsan qodobkaan waxaan kuugu soo bandhigeynaa codsiyo dhowr ah si aad ugu sameyso habka ugu fudud.
Afar talooyin si loo badbaadiyo meel on your casriga ah Android
Miyaad gabaabsi ka tahay goobta inaad ku sugto sawiradaada casriga ah Maanta maqaalkan waxaan ku sharaxeynaa 4 dariiqo oo meel lagu keydin karo.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha cusub ee loo yaqaan 'OnePlus 2', oo ah dilaaga calanka
Dhamaan faahfaahinta iyo qeexitaanka cusub ee Flagship Killer OnePlus 2
Kuwani waa qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee bilaaba Android
Ma rabtaa inaad bilowdo adeegsiga qalabka wax lagu rito ee ku shaqeeya qalabkaaga 'Android' Liiskan waxaan ku tusaynaa waxa fekerkeennu yahay 7da ugu fiican ee aad soo dejisan karto.
10 talooyin si loo badbaadiyo nolosha batteriga ee casrigaaga
Miyaad dhibaatooyin maalinle ah ku haysataa batteriga casrigaaga? Xalliyaan iyaga hadda mahadnaqda 10kan talooyin ee lagu badbaadinayo nolosha batteriga qalabkaaga.
7 taleefan oo casri ah oo aad ku iibsan karto wax ka yar 100 euro
Ma rabtaa inaad iibsato taleefan casri ah oo jaban? Liiskan waxaan ku tusi doonaa 7 terminaal oo kugu kici doona wax ka yar 100 euro.
7 Taleefanada gacanta ee Shiinaha, oo wanaagsan, qurux badan oo raqiis ah oo suuqa soo gaadhay sanadkii 2015
Mobiles-ka Shiinaha ayaa leh saamiga suuqa oo sii kordhaya maqaalkan waxaan kuugu soo bandhigeynaa dhowr ah oo wanaagsan, qurux badan oo waliba raqiis ah.
Sida looga faa’iideysto iPhone-kaaga si aad u barato inaad si fiican u seexato
Haddii aad haysatid iPhone markaa waxaad isticmaali kartaa dhowr barnaamijyo moobiil ah oo iswada waafaqsan oo iOS ah si aad u baratid sida loo seexdo.
Sida loo jaro kaarka SIM-ka si looga dhigo micro-SIM
Qodobkaan waxaan si faahfaahsan ugu sharaxeynaa sida loo jaro kaarka SIM si loogu badalo micro-SIM.
Tracker Xidhmada: Eeg taariikhda barnaamijyada Android ee lagu rakibay boosteejada
Tracker Xidhmada waa codsi Android ah oo naga caawin doona inaan dib u eegno taariikhda codsiyada la rakibo lagana saaro terminalka.
Waxaan tijaabinay HTC One M9, isku dayga cusub ee HTC ee dhamaadka-sare
HTC One M9 waa casriga casriga ah ee HTC waxaanan tijaabinay oo aan ku falanqeynay si faahfaahsan.
Samsung Galaxy S6 Edge Vs LG G4, ku dheelitirka meelaha ugu sarreeya
Samsung Galaxy S6 Edge iyo LG G4 waa laba kamida kuwa ugu caansan dhamaadka dhamaadka maantana waxaan waji ka waji u wajihaynaa, yaa guuleysanaya?
LG G4, waa ikhtiyaar xiiso leh oo ku dhex jira heerarka sare
Qodobka aan si faahfaahsan ugu falanqeyneyno LG G4 cusub, calaamadda LG.
Heerka U Xarig La, aanta Bluetooth-ga ah, sameecadaha sameecadaha badan ee Samsung
Heerka U Wireless Bluetooth Headset waa headphones-ka cusub ee Samsung kaas oo ku soo biiri doona qoorta oo keliya laakiin sidoo kale taleefannada casriga ah.
Microsoft Lumia 535, oo ah terminal-dhamaadka-hoose oo ku qancin doona
Maqaalka xiisaha leh ee aan si faahfaahsan ugu falanqeyneyno Microsoft Lumia 535, oo ah terminal dhammaad hoose ah oo kaa dhaadhicin doona.
Samsung Galaxy S6 Edge: taleefan awood badan oo curyaan ah
Qodobka aan kuu sheegeyno dareenkeena ka dib tijaabinta Samsung Galaxy S6 Edge cusub.
Hab cusub oo lagu xado lambarka sirta ah ee 'iCloud'
Cilmi-baare xagga amniga ah ayaa maareeya inuu soo saaro hab aad u fudud oo lagu xado lambarka sirta ah ee loo yaqaan 'iCloud password' iyadoo la adeegsanayo HTML iyo barnaamijka asalka ah ee boostada ee iOS 8
Feejignaanta & Dib-u-eegista Carl Zeiss VR ONE
The Carl Zeiss VR ONE waa natiijada sanado badan oo waayo aragnimo ah soosaarka muraayadaha indhaha iyo kor u kaca lama filaanka ah ee xaqiiqada dhabta ah.
Samsung waxay warshadeheeda Vietnam kula qabsaneysaa Samsung Galaxy S6
Samsung waxay daaweyneysaa hoos u dhaca macaashka. Tani waa sida dhowr shirkadood oo ku yaal Vietnam ay isu beddelayaan si loo yareeyo kharashka oo ay u helaan faa'iidooyin badan.
Kuwani waa dareenkayagii ugu horreeyay ka dib tijaabinta LG G4 cusub
Shalay waxaan awoodnay inaan tijaabino LG G4 cusub inkasta oo aan wali si rasmi ah loogu iibin Spain, kuwani waa waxyaabihii noogu horeeyay.
Sida loo sameeyo 360 ° fiidyow adoo isticmaalaya iPhone ama iPad
Cycloramic waa codsi aad u adeegsan karto iPhone-kaaga ama iPad-ka kaas oo kaa caawin doona sameynta fiidiyowyo 360 ° ah.
Gyf: Abuur Gif firfircoon oo ka socda iPhone si aad ula wadaagto asxaabta
Gyf waa codsi gacmeed loogu talagalay iPhone ama iPad kaas oo naga caawin doona inaan si fudud u abuurno 10-ilbidhiqsi Gif ah oo lala wadaago asxaabta.
Qditor: Tifatiraha Fiidiyaha ee Windows, Android iyo iOS
Qditor waa codsi naga caawin doona inaan iska ilaalino fiidiyowyada kumbuyuutarka Windows ama aaladaha moobaylka ee ku habboon.
Deeme: Kula wada hadal sawiradaada iyo sawiradaada iOS
Deeme waa barnaamij moobiil ah oo kaa caawin doona inaad la sheekaysato asxaabta kale adoo adeegsanaya kaliya sawirro iyo fiidiyowyo taleefankaaga gacanta ah.
Wareejinta macruufka: Macluumaadka wareejinta ee u dhexeeya macruufka iyo qalabka Windows ama Mac
Transfer macruufka waa aalad loogu talagalay Windows ama Mac kaa caawin doona inaad si fudud xogta uga wareejiso qalabkaaga moobaylka ee iOS.
Laba Shaandheeyeyaal Midab cusub oo loo adeegsado barta 'Instagram'
Cusboonaysiinta ugu dambaysa ee loogu talagalay 'Instagram' ee loogu talagalay 'Android' iyo 'iOS' waxay ku jiraan laba shaandhooyin midab cusub oo sawirro badan siin doona sawirradaada
Dib u Eegista Video iyo Falanqaynta Samsung Galaxy S6
Samsung waxay soo bandhigeysaa taleefankeeda casriga ah ee ugu fiican ilaa hadda: Galaxy S6, oo leh nashqad si tuhun ah oo la mid ah iPhone 6, iyo processor xoog leh
Snapchat waxaa lagu cusbooneysiiyaa emoticons cusub iyo wajiyo dhoola cadeynaya. Maxay uga dhigan yihiin astaamahan iyo emojis-ka barnaamijka moobiilka? Soo ogow
Sida loo saxeexo Wallapop
Shan beddel oo ah wicitaanka codka ee WhatsApp
Qodobka aan ku siineyno shan beddel oo ku saabsan wicitaanka codka ee WhatsApp in maalmahan ay rasmi u noqdeen isticmaalayaasha Android.
Sida looga saaro magaca hawlwadeenka shaashadda qufulka ee 'Android Lollipop'
Gudaha Android 5.0 Lollipop waxaad ka saari kartaa magaca hawl wadeenka shaashadda qufulka adoo adeegsanaya modulekaan Xposed
Samsung waxay gebi ahaanba joojineysaa cusbooneysiinta Android 5.0 ee Galaxy S4 iyo S5
Qodobka aan ognahay in Samsung ay go'aansatay inay joojiso cusbooneysiinta Android 5.0 ee Galaxy S4 iyo S5 sababo la xiriira dhibaatooyinka la soo sheegay.
Shan codsi oo lagu dhageysto muusikada taleefankaaga casriga ah
Qodobka aan kuugu soo bandhigno shan ka mid ah codsiyada ugu fiican ee la xiriira adduunka muusikada.
Sidee looga soo kabanayaa Sawirro si lama filaan ah loo tirtiray oo ku saabsan Android
Wondershare Dr. Fone waa codsi xiiso badan oo naga caawin doona inaan ka soo kabano sawirro ama faylal si shil ah loo tirtiray taleefanka gacanta ee Android.
5 Barnaamij oo looga hortago wicitaanada aan la rabin ee ku saabsan Android
Si aanan u aqbalin wicitaanada qaar ka mid ah isticmaaleyaasha taleefanka gacanta ee Android, waxaan isticmaali karnaa dhowr barnaamij oo khaas ah.
U beddel muuqaalka qaabka Style-ka 'Android' illaa 'iOS 8'
Khiyaanooyin yar iyo dabcan, oo leh codsiyo ayaan fursad u heli doonnaa inaan ku beddelno is-dhexgalka qalab kasta oo moobiil Android ah oo wata macruufka 8.
8 Codsiyada Android ee Wadahadalka ama Wadahadalka Videoga ah
8 Codsiyada Android ee aan ugu adeegsan karno aaladaha mobilada si aan ugu sheekaysanno ama u samayno shir fiidiyoow ah
7 waa inuu lahaadaa qalabka xusuus qorida ee ku saabsan Android
Soo uruurin yar oo ka mid ah barnaamijyada Android oo naga caawin doona inaan wax ku qorono moobaylkeena ama kaniiniyada
Nokia Lumia 830: Falanqaynta iyo Falanqaynta Fiidiyowga
Waxaan falanqeyneynaa taleefanka casriga ah ee Nokia Lumia 830, oo leh astaamo waaweyn oo ku qalabaysan qalab qiimahiisu aad u jaban yahay
Sida loo joojiyo 'akhriska' Facebook Messenger ee loogu talagalay Android
Adiga oo isticmaalaya barnaamijka 'Chat' Chat 'ee barta' Facebook ', waxaad ka eegi kartaa farriimaha ku jira Messenger-ka adiga oo aan soo diraha ogeyn
Instaradio: Ku samee qolkayaga raadiyaha qadka tooska ah taleefankaaga gacanta
Instaradio waa codsi xiiso leh oo loogu talagalay qalabka moobiilka oo aan si fudud ugu abuuri karno raadiyaha internetka.
Xaaladda: Sida loogu wargaliyo asxaabtayada inaan mashquul nahay
Xaaladda waa codsi moobiil ah oo ku ogeysiin doona asxaabteena inaan daqiiqad u heli karin ka jawaabidda wicitaanadooda.
Maxaa la sameeyaa kahor iibinta taleefankayga gacanta ee Android?
Haddii aan dooneyno inaan iibino ama aan siino taleefanka gacanta ee Android, waa inaan horey u isticmaalnaa tabaha qaar si aan u tirtirno macluumaadkaaga oo dhan.
Sida looga saaro dhammaan macluumaadka ipad-kayga ka hor intaanan iibin
Haddii aan isticmaalnay iPad-kayga muddo dheer oo aan iibineyno, waa inaan marka hore tirtirno dhammaan macluumaadka markaan dib u soo celinayno xaaladdi warshadeed.
YouTube: qaabab kala duwan oo loogu ciyaaro fiidiyowyadaada
Waxaa jira tiro xeelado ah oo loogu ciyaaro fiidiyowyada YouTube-ka ee shabakadda ama aaladaha moobaylka iyada oo aan la soo degsan.
Sida loo hagaajiyo xawaaraha Google Chrome ee ku jira Android
Iyadoo la adeegsanayo xeelad yar waxaan fursad u yeelan doonnaa inaan kordhino xawaaraha daalacashada ee Google Chrome qalabka mobilada Android.
Sida loo abuuro galka weelka dalabka ee iOS 8
IOS 8 iyo noocyadii hore waxay na siinayaan suurtagalnimada abuurista faylal weel halkaas oo aan ku keydin karno codsiyada la midka ah.
Anti Kaneecada Bilaashka ah: ku kaxee kaneecada dhibta badan meeshayada lagu ciyaaro
Anti kaneecadu waa barnaamij moobiil ah oo aan celin doonin kaneecada inta aan qoyska kula raaxaysanayno safar dalxiis.
Soo dejiso oo rakib Lollipop Android 5.0 Nexus 5, 4, 7 iyo 10
Sida gacanta loola soo degsado oo loogu rakibo sawirka 5.0 Android ee Nexus 4, 5, 7 iyo 10
Sida loo sameeyo barnaamijka cusub ee Facebook loo furo xiriiriyeyaasha biraawsarka
Facebook wuxuu bilaabay inuu barnaamijkiisa moobaylka ka dhigo mid ku furaya bog furaha shabakaddiisa internetka. Waxaan kuu sheegeynaa sida looga laaban karo isbedelkan.
IPhone 6 Plus shil sabab la'aan
Qodobka halka aan ka ogaanno dhibaatada cusub ee saameysa iPhone 6 Plus ee u beddeleysa terminaalka qalab aan faa'iido lahayn.
Samsung Galaxy Note 4, dareenka ugu horreeya ee fiidiyowga
Falanqaynta fiidiyowga ee Samsung Galaxy Note 4 oo aan ku aragno astaamaheeda, shaashadda iyo fursadaha S-Pen cusub.
Xalliyaan dhibaatooyinka xisaabta ee PhotoMath ee iPhone
PhotoMath waa aalad loogu talagalay aaladaha mobilada oo naga caawin doona inaan si dhakhso leh u xallino nooc kasta oo dhibaato xisaabeed ah.
Sida loo barnaamij ka joojinta barnaamijkeena TV-ga ee 'Android TV-Box' oo leh Xiritaanka Saacadda
Xilliga Xiritaanka waa qalab bilaash ah oo loogu talagalay aaladaha mobilada ee Android oo naga caawiya inaan jadwal u dhigno kumbuyuutarka si loo xiro waqti cayiman.
Sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo marinno kala duwan oo ku saabsan Android
Si dhakhso leh u hel goobaha Android sida abuurista barta Wi-Fi ama ogaanshaha isticmaalka xogta ee widget
Sii sawir xiriir si aan ula wadaagno sawirro aan ku xirnayn Android leh Aqoonsiga Aqoonsiga!
Aqoonsi! waa qalab fudud oo sawir ka dhigaya dadka lala xiriirayo ee aan wax sawir ah ka haysan aaladda gacanta ee Android.
Dhammaan macluumaadka iyo astaamaha iPhone 6, taleefanka cusub ee Apple ee leh iOS 8 oo layaab ku ah shaashadiisa cusub iyo processor-ka Apple A8.
Isbarbardhig: Samsung Galaxy S5 vs. Samsung Galaxy S5 Firfircoon
Farqiga u dhexeeya Samsung Galaxy S5 iyo Samsung Galaxy S5 Firfircoon
Sida loo demiyo ikhtiyaarrada horumarinta ee Android
Xeelad yar ayaynu ku heli doonnaa suurtagalnimada in la baabi'iyo xogta ku jirta Ikhtiyaariyaha Soosaarayaasha ee Liiska Android.
Sidee looga furaa isticmaalaha 'Snapchat'
Haddii aan si kadis ah ugu xirnay saaxiibkiis Snapchat, waxaan fursad u lahaan doonnaa inaan ka furno si aan u sii wadno la sheekaysiga.
Sidee looga helaa ipad-ka iga lumay kombuyutarkayga
Codsi iyo xeelado dhowr ah ayaan ku ogaan karnay meesha saxda ah ee iPad-ka lumay ku jiro.
Sida looga soo saaro sawirada fiidiyowga iPhone
Waxaan ku tusineynaa sida aan sawirada uga soo saari karno fiidiyowyadeena laga duubay iPhone ama iPad iyadoo codsi fudud laga heli karo App Store.
11 codsiyo moobiil ah oo naga caawin doona inaan lacag dhigno
In yar oo ka mid ah codsiyada moobiilka ah ee naga caawin doona inaan u isticmaalno rasiidhada qiimo-dhimista dhijitaalka ah iibsashada kala duwan ee alaabada iyo adeegyada.
Sida Loogu Tafatiro Sawirada iPad-ka Sida Prophic Pro
Codsi bilaash ah ayaan ku dhejin karnaa saamaynta, looxyada, istiikarada iyo waxyaabo kale oo badan markii tafatirka sawirrada iPad-ka si fudud oo dhowr tallaabo ah.
Sida loo demiyo Xarunta Ciyaaraha
Codsiga Xarunta Ciyaartu waa mid ka mid ah kuwa ugu xun, haddii uusan ahayn tan ugu xun uguna faa'iido badan ee iDevices ay ka soo qaado guriga. Waxaan ku tusaynaa sida aad barkinta uga furi karto.
Sida loo beddelo noocyada farta ah ee ku jira Android xididka ama aan lahayn
Waxaan ku baraynaa sida loo beddelo noocyada ku qoran Android ee leh mudnaanta aasaasiga ah ama aan lahayn xidid, laga bilaabo LG, Samsung ama qalab kale
Sida loo wanaajiyo isticmaalka xogta ku saabsan qalabkeena gacanta ee Android
Waxaan kuu soo jeedinaynaa talooyin dhowr ah si aad ugu keydiso isticmaalka qorshaha xogta taleefankaaga gacanta ee Android.
Sida loo helo filimada labada jilaa ee aad ugu jeceshahay
Caawinta codsi loogu talagalay aaladaha mobilada ee leh iOS waxaan awoodi doonnaa inaan helno filimada ay kaqeybqaateen 2-da jilaa ee aan jeclahay.
Sida loo dhigo qalabkayaga Android si loogu seexiyo Saacadda Hurdada
Waqtiga Hurdada waa barnaamij Android ah oo joojiya muusikada ka dibna seexda aaladdayada moobiilka.
Sidee si ammaan ah ugu wareejisaa aaladda Android kuwa yaryar
TimeAway waa codsi Android ah oo mamnuucaya isticmaalka aan habboonayn ee aaladaha moobiilka ee carruurta fog fog ee waalidkood.
Tilmaamo si loo badbaadiyo batteriga aaladaha moobilkeena
Dhowr talooyin wax ku ool ah si loo badbaadiyo batteriga qalabka moobiilka aan jecel nahay, adoo adeegsanaya softiweer ama adeegsanaya qalab.
Qaadashada shaashadda shaashadda 'Android Wear'
Xeelad yar ayaynu ku lahaan doonnaa suurtogalnimada inaan ku qaadno shaashadda shaashadda 'Android Wear'.
Sida loo xannibo barnaamijyada Android ee qalabkeena gacanta
Avast Mobile Security & Antivirus qaybteeda bilaashka ah waxay noo ogolaaneysaa inaan xannibno 2 codsi ama shaqooyinka qalabka moobiilka ee Android.
Sida loo soo dejiyo loona rakibo Z Launcher qalabkeena Android
Z Launcher waa furaha cusub ee mobilada Android kaas oo si habsami leh u abaabulaya raadintayada codsiyada ku yaal terminaalka iyadoo tilmaam taabasho ah.